Ny vahoaka aloha vao vahiny… | NewsMada
Hisy amin’izay ny hoe fahamarinan-toerana politika? Efa hitsangana avokoa izao ny andrimpanjakana rehetra, fa mandamin-javatra betsaka ny amin’izany ny fijoroan’ny Antenimierandoholona.
Na izany aza, eo ihany ny ahiahy tsy ihavanana: tena hampiorina fitoniana ve izany? Mila fampihavanana ny raharaha. Lazain’ny mpitondra rahateo fa fototry ny fampandrosoana ny fihavanam-pirenena.
Sanatria, mbola hifandroritana indray ny amin’izay hoe fampihavanam-pirenena izay, raha hotohizana sy hovitaina tokoa. Hifampikitrana lava eto? Tsy inona izay fampihavanana raha ikajikajiana politika.
Tsy inoana hisy zava-banona koa eto raha fahamarinan-toerana politikan’ny mpitondra ihany no imasoana, indrindra amin’izay ifandraisana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Mby aiza ny fifandraisana amin’ny vahoaka?
Amin’izao, ifandroritana indray, ohatra, ny famonjena ireo tratran’ny haintany sy mosary any atsimo. Fitaovana politika? Na tsy ahoana firy izay fahoriam-bahoaka, fa ny politika amin’izany no mahamaika ijerena azy…
Samy zava-dehibe ilaina na ny famonjena maika, na ny vahaolana maharitra? Zarazarao ny raharaha. Tsy hoe hanjakazakana, sanatria. Mba ny tapa-tongotra, mitoto vary; ny bory tanana, miandry omby.
Manatanteraka izay tena vahaolana maharitra ny fanjakana: famatsian-drano, fanajariana ny tany… Mifanome tanana mamonjy amin’izay voatsirambin’ny tanana ny hafa rehetra amin’ny sakafo, fanafody, masomboly…
Hafahafa raha manao vahaolana vonjy tavanandro ny mpitondra, fa tsy maharitra: fisehoana ho manao zavatra, na fibahanana ny hafa amin’izany… Mila asa sy fivelomana azo antoka mandavantaona ny vahoaka.
Hialana amin’ny fanampiana any aoriana ny fanampiana, fa tsy fiankinan-doha lava. Ahoana, ohatra, ireo mpatory amoron-dalana 800 mahery nesorina teto Antananarivo Renivohitra? Ny asa ivelomana, ny trano fonenana maharitra…
Sao sanatria fanafenana ny fahoriam-bahoaka no atao, fa tsy fanarenam-piainana? Ho avy izao ny fihaonana iraisam-pirenena. Na fatra-panaja sy mahay mandray vahiny aza, tsy ho ambany maso tsy hita ny vahoaka.